#Messi Oo Laga Saaray Liiska Cayaartooyda U Safanaya Maanta Kooxda Barcelona
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 25, 2019 Last updated Aug 25, 2019
Tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaa markii uu qabanayay shirkiisa jaraa’id waxaa wajigiisa ka muuqatay inuusan fileynin in Lionel Messi uu fursad u heysto inuu ciyaaro kulanka Real Betis oo ah kulankooda labaad ee xilli ciyaareedka horyaalka La Liga.
Barcelona ayaana haatan xaqiijisay markii ay baahiyeen liiska xiddigaha ka qeybgalaya kulanka maanta iyadoo Lionel Messi uu ka mid noqon waayo liiska 18ka xiddig ee la magacaabay.
Messi ayaa ku guuldareystay inuu tababar la qaato kooxda inteeda kale isagoo si gooni ah tababar u sameeyay taasoo muujineysa inuusan weli si buuxda uga soo kabsanin dhaawacii uu qabay.
Valverde ayaa shaaca ka qaaday inuusan dooneynin inuu wax halis ah geliyo xiddigiisa islamarkaana muhiimada ay tahay in weeraryahanka la siiyo waqti uu ku kabsado.
Messi ayaa tababar la qaatay ciyaartoyda Barcelona labadii maalmood ee ugu danbeysay laakiin waxa uu seegay tababarkii shalay taasoo la micno ah inuusan qeyb ka aheyn kulanka Betis isagoo weli ka soo kabanaya dhaawaca kubka ee uu la maqnaa.
Maqnaanshaha Messi ayay madax xanuun ku tahay tababare Valverde madaama labada weeraryahan kale ee Ousmane Dembele iyo Luis Suarez ay iyagana dhaawac yihiin.
Si kastaba, waxa uu ku tashan karaa Rafinha Alcantara kaasoo ka soo kabsaday xanuun gaas ah oo uu la ildarnaa Jimcihii.
Barcelona ayay u badan tahay inay afka hore ka ciyaarsiiyo Griezmann, Rafinho iyo xiddiga Barcelona B ee Carles Perez.